လိုင်းကားပေါ်မှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » လိုင်းကားပေါ်မှာ
Posted by မောင် ပေ on Aug 17, 2012 in Facebook, News | 45 comments
တစ်ရက်က မန်းဂေဇက်မှာ ညီမငယ် အိတုံရေးခဲ့ဖူးတယ် ။ လိုင်းကားပေါ်မှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့ အတွဲများဆိုတာ ၊ သူက ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အကြောင်းမဖန်လို့ မရိုက်ခဲ့ရဘူးတဲ့…
အခု ကျွန်တော်ဖေ့ဘုတ်ကနေ ရလာတဲ့ ဓါတ်ပုံလေး၂ပုံကို ပြန်ရှဲချင်ပါတယ်…
ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့သူဟာ အိတုန်လို ကိုယ်တွေ့ ကြုံရတဲ့အချိန်မှာ သူ့ ဖုန်းကင်မရာနဲ့ သေချာရိုက်လိုက်တယ် ထင်ပါတယ်
သူ့ အယ်ဘမ်ကိုတော့ ဒီလိုခေါင်းစဉ်တပ်ထားပါတယ်
Maths final year student at East University
နောက်ပြီး သူ့ ဓါတ်ပုံအောက်မှာပဲ သူက ဒီလိုပြန်မန့် ထားပါသေးတယ်
“ ငါ့ရှေ့ လာပြီး သာယာနေကြတာကိုး… သောက်မြင်ကပ်လို့ တဲ့ ” ဟားဟား
ဘာရယ် ညာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး
လူ့ မြင်ကွင်းမှာ ဒီလို ဒီလို ဆိုတာတွေကို မမြင်ရသေးတဲ့လူတွေ မြင်ရအောင်လို့ ပါ
လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ကြပါ ခင်ဗျား
ကျုပ်ကတော့ ဝေဖန်ပါဘူး ..
တရားဘဲ စွဲပစ်လိုက်တော့မယ် .. :D
တော်တော် ဆိုးတဲ့ ဟာတွေ ..
ပန်းခြံတွေ ဘာတွေထဲဆို တော်သေး ..
ခုဟာက .. အဟင်း ..
(တော်ဒေးဒယ် .. နာ့ပုံ မဟုတ်လို့ .. ဟူးးးး) :D :D
အံစာတုံးရေ နင်တို့ ကဲနေတာကို နင့်အရင်ခွင့်မတောင်းပဲ တင်မိလို့ ခွေးလွှတ်ပါကွာ ဟီဟိ
ကိုအံစာ စံပါယ်လေးနဲ့အဆင်ပြေရင် ပန်းခြံပဲသွားနော်
ကိုအံစာ ဟုတ်ပါဘူးဂျာ ..
အနော်က မရွှေကြည်ထက် ၃ နှစ် ငယ်ပါသဗျ ..
ဒီတော့ မောင်ငေး ပေါ့လို့ .. အဟိ .. :D
ကျုပ် စံပါယ်ဆိုတာ စိတ်ကူးပါလို့ ..
အပြင်မှာ ဂယ်ဟုတ်ပါဘူးလို့ ..
ကျုပ်တို့တောသားများ၊ ဒါမျိုး ခါမှမြင်ဖူးဘူး။
ကြုံဖူးတယ်တကယ်ကဲကြတာ ဒါကခုံကပ်ရက်မို့။ ရွှေကြည်ကြုံရတာက ရှေ့ခုံမှာကောင်မလေးကအစွန်မှာ
နေရာရတယ်ကောင်လေးကဘေးကရပ်နေတာ သူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာရေးမပြတော့ဘူး မရေးရဲလို့။
ကိုယ့်ရှေ့တည့်တည့်။ ဘေးနားကလူကလည်းမြင်သွားပြီး ရွှေကြည်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။
သိပ်ရှက်စရာကောင်းတယ်။ မျက်လုံးမှိတ်ပြီးလိုက်လာခဲ့ရတယ်။ နောက်ကောင်လေးကလျှောက်လမ်းခြားပြီး
ခုံရတယ်။ လူနည်းနည်းလေး ခြားတာနဲ့ လက်ခြင်းလှမ်းကိုင်ဆုပ်ထားတယ် ဆင်းမလို့ဆိုပြီးပြောရတယ်။
အင်း — သူ့ဟာနဲ့သူတော့ သာယာနေတာပေါ့ဗျာ ! နှစ်ပုံ တည်းလား ? ကိုပေ !
ဟား ဟား ဟား ဟား … ရယ်မိသွားပါတယ် ကိုပေရယ် … ကိုပေ့စာထဲမှာ ပါတဲ့ ..ကော့မန့် ကြောင့်ပါ … ။
ကျွန်မဖုန်းက ရှက်တာဆောင်းမ်ပိတ်လို့ မရတော့ ……. ringtone သံကိုဖျောက်ပြီး vibrate လုပ်ရိုက်မှပဲ အသံပျောက်တာ…. ။ တစ်ခါတစ်ခါ မြင်နေတွေ့နေရလျှင် …. လက်သရမ်းဖို့ ထက် … vibrate လုပ်မိရဲ့လားလို့… ပြန်ပြန်စစ်နေရတယ် … ။ ခိုးရိုက်ပါမှ အသံထွက်လာလျှင် … အတော်လေးရှင်းရမယ့်ကိန်းမို့ပါ … ။
အခုနောက်ပိုင်း …. ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး အတော်လေးကို များလာပြီ … ကိုပေရေ ။ သူတို့တော့ မျက်နှာ ပူလား မပူလား မသိဘူး … သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထိုင်နေရသူတွေကတော့ .. မနေတတ်မထိုင်တတ်ကို ဖြစ်လို့ပေါ့ … ….. ။ ဒင်းတို့ မိဘတွေနဲ့များ .. ကားပေါ်မှာ တခါလောက် ဆုံစေချင်စမ်းပါတယ် ဟယ် …. ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ …
စိတ်လည်းညစ်ပါတယ်…အပြင်တောင် ပျိုလည်း မထွက်ဝံ့ပြီ….
မခိုင်ကြီး သီချင်းကို ဆိုသွားပါတယ်…
ကိုမောင်ပေ ကို ကျွန်တော့်ဗိုက်ပူနံကား ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေမှာ ထည့်သုံးထားတယ် သဘောကျ ရဲ့ လား သုံးတုန်းက သုံးပြီးတော့ မပြောဘုးဖြစ်မှာ စိုးလို့..ဆော်ရီး..။
အရင်ကတည်းက.. ဒီလောက်ဖြစ်တာကို.. ပြောကြတာလားဟင်င်…
ကျုပ်က..ပါ့ဗလစ်မှာ.. ကလေးတွေမကြည့်ရတဲ့အဆင့်.. ပီဂျီ၁၃လယ်ဗယ်တွေလောက်ဖြစ်နေတယ်ထင်တာ..။
သဂျီး..သဂျီး…သမီးတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်နောက်ကျ ကျန်မနေဘူးဆိုတာ လက်ခံပြီလား…
အင်းလေ .. အူးပေကလည်း ဖရန့်ခ်ျကစ်ပေးနေတဲ့ပုံဆိုဟုတ်သေး
အရင်(ပို့စ်တွေ.. စာတွေမှာ)ကတည်းက.. ဒီလောက်(လေး)ဖြစ်(နေ)ကြတာကို.. (အထူးအဆန်းလုပ်) ပြော(နေ)ကြတာလားဟင်င်…
ပါ့ဗလစ်မှာ.. ကလေးတွေမကြည့်ရတဲ့အဆင့်.. PG-13 rating တွေလောက်ဖြစ်နေတယ်ထင်တာ..။
(ဒါလေးများ ..ဗျာ.).. လို့..။
ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ဆိုသလိုပေါ့…ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုမှအရေးယူလို့ ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ မမြင်ချင်ယောင်သာဆောင်လိုက်ပါဗျာ…
ဘာလို့များ ဆိုင်ကယ်ကိုကျတော့ ရှေ့နောက်ထိုင်ဖို့ တီထွင်ခဲ့လည်းမသိဘူးဗျာ။
အကယ်လို့သာ ဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်ဘို့ တီထွင်ခဲ့ရင် မန်းမှာလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်လို့
အဲလောက်ကိုတော့ လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်။ လူမြင်ကွင်းထဲ ဟိုကိုင်ဒီကိုင် ဟိုနှိုက်ဒီနှိုက်လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ရင်၊ ဖရန့်ခ်ျကစ်လို လျှာချင်းလိမ်နေ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ရင်၊ သိပ်လွန်လွန်ကျူးကျူးပွတ်သီးပွတ်သပ်လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ရင် နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။
ကိုပေ ရေ အဲလောက်လေးများ နော်၊ ကျမတို့ မြောက်ဒဂုံ ကလိုင်း ကားတွေ များ ညနေပိုင်း ကျောင်း ဆင်း ချိန် ဆို မမြင် ချင် မှ အဆုံး ။ အထူး ကား ပေါ် တော့ ပြော မနေနဲ့ ၊ ၄၉ ဒိုင်နာ ပေါ် မှာ ဘေး တိုက် အတန်း လိုက် ထိုင်ရ တာတောင် ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ် နေကြတာ။ ကောင်လေးတွေ က ကောင် မလေးတွေ ကို ပခုံး ပေါ် က နေ မဖတ်တော့ ဘူး။ ဂျိုင်း အောက် ကနေ လျှို ပြီး အပြီ ကိုင်နေ ကြတာ၊ ကားပေါ် ပါတဲ့အတွဲ တိုင်း လောက် နီးနီး ပဲ။ အတွဲ ကလည်း ၅တွဲ လောက် အနည်း ဆုံး ပါတတ်တော့ ကိုယ် လို ကလေး အမေ တောင် မျက်နှာဘယ် လှည့် ထား ရမှန်း မသိဘူး။
ပါရမီ ကား ပေါ်မှာ လား၊ ရန်ကုန်မှာလား၊ မန္တလေးမှာ လား။
ဒင်းတို့ အတော် ကမြင်း ကြပါလား။
ခုံတွေအရဆိုရင်တော့ အဓိပတိကားလိုင်းပေါ်မှာ ဖြစ်ရမယ်။
မနောလည်း ဖြစ်ဖူးတယ်။ ပါးချင်းတင်မဟုတ်ဘူး ခေါင်းချင်းပါ တိုက်မိတာ ဘေးက သံဘောင်နဲ့လေ အိပ်ငိုက်လွန်ပြီး ဖြစ်တာ ခဏခဏပဲ ဟီး
အားကျလိုက်တာ .. အဲအဲ ဘယ်နဲ့ အမှန်အတိုင်း ထွက်သွားပါလိမ့် ။။
မျက်စီရှက်လိုက်တာလို့ မြင်ကောင်းအောင် ရေးရမှာ ..
ဒီလောက်ကတော့ သူ့ ချစ်သူ သူချစ်လို့ ဘဲ .. ချစ် တတ်ကြပါစေ .. အော်ဟစ်ဆဲဆို ရန်ဖြစ် ငိုနေကြတာထက်စာရင် ဒီလိုမြင်ရတာ ဂွတ်ပါတယ် ….
ဒီလိုပါပဲ ဖြစ်တက်ပါတယ်…… အဲဒီလိုတာ မဖြစ်ရင် မြန်မာဘဲ ပီတပါ့မလဲ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လာ?
အနုတ် ပေးခဲ့တယ်ဗျာ … အဲဒါလေး ပြောပြတာ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ comment ရဲ့ ဆိုလိုရင်း ကို သဘောမတူ လို့ ..။
သူတို့ ဘာသာ သူတို့ ငစမာန် ထနေတာ (တည်းခိုခန်း တွေ ဒီလောက်ပေါ နေတာကို) နဲ့ မြန်မာ ပီသ တာ နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး .. မြန်မာ ပီသ အောင် ပဲ .. အဲလို တွေ လုပ်ပြရမယ့် အပေါက် မျိုး ပြောတာ တော့ မကြိုက်ဘူးဗျို့  ..။
တည်းခိုခန်းဆိုလို့ အရင်တုန်းက လစ္စလမ်း (အပေါ်) က ဘီယာဆိုင်မှာထိုင်နေပြီဆိုရင် အလုပ်ဆင်းလို့လားကျောင်းဆင်းလို့လားတော့ မသိ ဘူး ညနေ ၆ ကျော်ဆိုရင် အတွဲလေးတွေ။အတွဲလေးတွေ ။ ထမင်းချိုင့်လေးတွေကိုယ်စီနဲ့ ဘီယာဆိုင်အပေါ်က တိုက်ခန်းမှာ ဖွင့်တဲ့ တည်း ခိုးခန်းတွေ ကိုသွားတာတော့ မကြာမကြာတွေ့ဖူးတယ်။ အဲဒီအပေါ်ထပ် မှာ တည်းခိုးခန်းက ၃၊၄ ။၅ ခုလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။
ကြော်ငြာ ၀င်တာပါ ။
ကျောင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဆွဲပေးတဲ့ လိုင်းတွေမှာ အမြဲလိုလိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တို့၊ အခါကြီး ရက်ိကြီးပိတ်ရက်တို့လိ်ု ရက်မျိုးတွေမှာလည်း တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဘတ်(စ်)ကားကြီးတွေပေါ်မှာ ပိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုပုံလောက်ကဒေါ့ တားတား ဒို့ ရင်မထုံ ဗူး တိုတိုပေ …။ ဓိ့ထက် လန်း ဒါ တင်ရဲရို့လား ….။
ဒါကတော့ ဒီလိုရှိပါတယ် ဆရာ၊ဆရာမတို့ 
ကျွန်တော့်ခဗျာလဲ ကြည့်ချင် မြင်ချင်မိတာပေါ့နော်
ကိုယ်တိုင်ကြုံတာလေးတွေလဲ ရှိပေမယ့် ၊ ညီမငယ်အိတုန်လို ပဲ ကင်မရာက ရှက်တာဆောင်း က ပိတ်မရတဲ့အခါကြ ၊ ရယ်ဒီမိတ်လေးတွေကိုပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ တင်ပြီး ကွန်မင့်လေးတွေချူလိုက်တာပေါ့နော် ( ခက်ဒစ်တူ ပေါက်ဖော် ) ဟီဟိ
ကွန်မင့်များဖြင့် ဝိုင်းဝန်းအားပေးကြပါသော ချစ်ညီကို ချစ်ညီမ တို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ကျုံးဘေး ထက် ပို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရှိတာက နန်းရှေ့ ရေစစ်ကန် ပတ်လည်မှာပါ ခင်ဗျ
ရေစစ်ကန် မြောက်ဘက်လမ်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ အုတ်တံတိုင်းဘေးတောင်မရှောင်ဘူး
နောက်ပြီး… သုဓမ္မာဇရပ်တွေနားက အအေးဆိုင်လေးတွေမှာ တစ်ရက်လောက် သွားထိုင်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ( မထိုင်ဖူးသေးဘူး ဆိုရင်ပေါ့ )
အအေးဆိုင်တွေက ၂ယောက် ချောင်ချောင်လည်လည် ထိုင်လို့ ရတဲ့ ပက်လက်ကုလားထိုင်လေးတွေ ကို ထီးအကြီး ၂ခု နဲ့ မိုးပေးထားတယ်လေ..
အဲ့ထိုင်ခုံဘေးက မြေပြင်တွေမှာကြည့်လိုက်ရင် သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံးတွေချည်းပဲ
ကျန်းမာရေးအသိရှိကြတာ ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်နဲ့ ကာလသားရောဂါစုံကာကွယ်တာ ၊ သားဆက်ခြားကြတာ ကို အသိအမှတ်ပြုရမယ်ဗျ
အဟိ..ဒီတစ်ခါ မန်းးလေးးးရောက်ရင်…အဲ့နေရာတွေ လိုက်ပို့ပေးးပါလားးးး ကိုပေရ…ဟီးးးးးးးးးးးးးးး။
အိုင်ကတော့ ဒါကို ယူတို့လောက် အပြစ်တစ်ခုလို့မမြင်မိပါဘူး
စုံတွဲတစ်တွဲ တူတူလျှောက်လာပြီး သူတို့ဖာသာ ဘယ်လိုသဘောခွေ့သွားတယ်မသိ
ကစ်စ်စ်စ်စ်စ် ဂျဘာလေရော ချစ်ဂျဒါဂိုး
သူ့အလုပ်သူလုပ်တာ စိုက်ကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူများသာအပြစ်ရှိလေမလားဘဲ ( အဘိဓမ္မာ )
အော် အေ … ဒီလောက်ကတော့ ကပေရယ် နင်တို့အတွဲဆို ဒီထက်တောင်ဆိုးသေးတာကို
ဆိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး မပုရယ် ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်ကြတာပါ
ချစ်တယ်ဆိုတာလဲ လူ့ မြင်ကွင်းမှာတော့ မချစ်ပါဘူး
ဘယ်နေရာမှာချစ်သလဲ ဆိုရင် ၊ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲပဲ ရှိတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့
မပု အတွက်ကလဲ မကြာမှီ လာမှာဆိုတော့ ၊ နည်းပေးလမ်းပြပေါ့
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ၃၁မှာ ၁၄ ၊ ၁၅ က စပြီး
တော်တော်ကြီး အောင့်အီးသည်းခံ ထိန်းချုပ်ခဲ့ထားတဲ့ ရေကာတာ ရဲ့လွှတ်အားဟာ
နေ့ စဉ် ၂၄နာရီ နာရီမိနစ်စက္ကန့် မလစ် ပြင်းထန်လောက်မယ် ထင်ပါရဲ့ 
နောက်ထပ်ပိုဆန်းမှာက နည်းအသစ်တွေပါ ထပ်+လာမှာပေါ့ဗျာ
ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်….
အမတော် နောက်တစ်ခါ ထပ်ဖတ်ဖြစ်ပါ့မလားလို့စိတ်ပူနေမိတာ
အခုတော့ မျှော်လင့်ချက်ပြည့်ပြီမို့ ၊ ညနေကြရင် ဘုရားသွားမယ်
ထီပေါက်ရင်… အမပုအတွက် ခရီးစဉ်လက်မှတ်ဖိုး စပွန်ဆာပဲဗျို့ 
၂ခါတိတိ မန့် ပေးတဲ့အတွက် ၄ကျပ် ခိုင်ပါ၏
အင်း သူများနှင့်မတူအောင် မန့်ရရင်တော့ ။ အဘ အမြင် ပေါ့နော် ။
၁ ။ ဒီလောက်လေး သာမာန် နမ်းရုံ နှင့်တော့ ဘာမှပြောစရာ မရှိပါဘူး ။
အားတောင်ပေးပါသေးတယ် ။ မြင်ရတဲ့သူလည်း ကြည်နှုး ချမ်းမြေ့စေတယ် ။
အော် ၊ သူတို့ စုံတွဲ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ချစ်ခင်ကြင်နာကြရှာတယ်ပေါ့ ။
၂ ။ ကောင်မလေး က လူတွေရှေ့မှာဆိုတော့ ရှက်ယောင်ဆောင် လိမ့်မယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ စိတ်ထဲမှာတော့ ကြိတ်ပြီး အရမ်း ကြည်နှုးနေမှာပါ ။
( ငါ့ ဘဲဘဲ က ငါ့ကို ချစ်ရှာတယ်ပေါ့ / အမှန်က သူမ အထင်ရယ်ပါ )
၃ ။ ယောက်ကျားလေး မှန်သမျှ ဒီလို သာသာလေး နမ်းတာမျိုးကို ၊
လူမြင်ကွင်း မှာ ( လူမြင်ကွင်း မှာ ) မကြာခဏ လုပ်ပေးသင့်တယ် ထင်တာပဲ ။
၄ ။ Sex သဘောပါတဲ့ ပါစပ်ချင်း စုတ်ပြီး နမ်းတာ French Kiss ၊
အကြာကြီး အရေးပါတဲ့ နေရာတွေကို အသားယူ ဇိမ်ခံပြီး ပွတ်သပ်နေတာ ၊
မဟုတ်ရင် ပြီးတာပါပဲ ။
ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကတော့ နေ့စဉ် လိုင်းကားစီးနေရတဲ့သူတွေအဖို့ ရိုးနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါဗျို့ …
ဒီထက်ဆိုးတဲ့မြင်ကွင်းတွေတောင်ရှိသေး.. မကြည့်ချင်တဲ့သူကသာ မျက်နှာလွှဲနေလိုက်ပေတော့ …
blue ခွေတောင် ငှါးကြည့်နေရတာ ဒါလေးက half blue အဆင့်တောင်မဟုတ်သေးတဲ့ quarter blue ပါ သူတို့ သူတို့လဲ အားမရ ဖြစ်နေကြမှာ ကြည့်နေရတဲ့ ခံစားမှုလဲ…..မဆိုးပါဘူးလေ သူတို့ခင်ဗျာ အချိန်ရှိခိုက် လုံးလ စိုက်နေတာ မရိုးမရွဖြစ်နေရတာ ထက်တော့ သာယာမှုတွေမပို ပါဘူး။ တစ်စိမ့်စိမ့်သာ ကြည့်ပေးပါ ။ ကမဂုံစိတ် ရှိနေတာဟာ အသက်ရှည်နေခြင်း ကို အားပေးပါတယ်။
ဦးပေ အားကျတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်
ဘယ်လောက်ပဲချစ်သူတွေဖြစ်နေပါစေ လူမြင်ကွင်းမှာတော့ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ယိုသူမရှက်၊ မြင်သူရှက် ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူး။